Khuphela iividiyo ze-Twitter ➵ Khuphela iividiyo, ii-gifs, iifoto zetwitter, imifanekiso yeprofayile, iibhena zentloko, iithonjana, imibhalo engezantsi, iiphalethi zemibala, iithegi ezivela kwi-Twitter.
Usebenzisa uhlobo oludala. Cofa apha ukufaka inguqulelo yamva nje 1.0.1
Khuphela iividiyo ze-Twitter
❝Khuphela iividiyo ze-twitter kunye ne-GIF kwii-tweets❞
➶ Khuphela iividiyo, ii-gifs, iifoto zetwitter, imifanekiso yeprofayile, iibhena zentloko, iithonjana, imibhalo engezantsi, iiphalethi zemibala, iithegi ezivela kwi-Twitter.
Isikhupheli sevidiyo seTwitter sisixhobo esikwi-intanethi sokukhuphela iividiyo ze-twitter kunye ne-GIF ezifakwe kwii-tweets. Gcina nayiphi na ividiyo kunye ne-GIF kwi-Twitter.
Isikhupheli sevidiyo seTwitter kwiChannel / Firefox
Umkhupheli weVidiyo yeTwitter ikuvumela ukuba ukhuphele iividiyo kwi-twitter okanye ugcine ii-gifs ezivela kwi-twitter ngqo kwi-PC yakho, ithebhulethi okanye kwifowuni ye-Android. ➥ Faka ngoku
Ungazikhuphela njani iividiyo kwi-Twitter
Ngaba ukhathazeka malunga nokonga iividiyo ze-twitter kwi-intanethi kunye nokukhuphela i-GIF kwi-twitter? Landela la manyathelo mathathu alula kunye nokukhuphela ukonwaba!
Emva kokungena kwiakhawunti yakho ye-twitter, cofa kwi-drop down arrow ekhoyo kwikona ephezulu ngasekunene kwevidiyo ofuna ukuyikhuphela kwaye ukhethe Khuphela ikhonkco kwi-tweet.
Emva kokuba i-url ye-tweet ikhutshiwe, cofa ekunene kwimouse yakho ukuze uncamathisele i-url apha kule bhokisi yokubhaliweyo ingasentla kwaye ucofe u-Enter key.
Isikhupheli sevidiyo sethu se-Twitter siza kukhupha ikhonkco levidiyo ekumgangatho ophezulu we-MP4, kwaye unokukhetha ukukhuphela nawuphi na umgangatho owufunayo.
Ungazikhuphela njani iividiyo ze-Twitter ngolwandiso lweChannel kunye nokongezwa kweFirefox
🧐 Ngamanye amaxesha sidibana neevidiyo ezinobuchule ku-Twitter esingenako ukumelana nokukhuphela. Ukugcina umfanekiso akukho ngxaki. Iividiyo, nangona kunjalo, unokufuna okhuphelayo wevidiyo othembekileyo we-twitter. Isixhobo sikuvumela ukuba ukhuphele kumathala eencwadi e-akhawunti. Landela isifundo esilandelayo ukusebenzisa eyona ikhuphelayo yevidiyo ye-Twitter ukugcina ividiyo kunye ne-GIF kwi-Twitter. Masihambe!
Vula iwebhusayithi ye-Twitter.
Dlala ividiyo kwi-Twitter.
Vula isilayidi sevidiyo seTwitter kwiChannel / Firefox ➥ Faka ngoku
Cofa kumgangatho ofuna ukukhuphela.
Emva kokuba uvule esi sixhobo, iqhekeza lekhowudi liya kwenziwa kwithebhu yangoku. Le khowudi inoxanduva lokuhlalutya ikhowudi ye-json kwaye ufumane i-id ye-tweet ngoku ebonisa kwiscreen. IiTweets ezingabonakali kwisakhelo sesikrini azihoywa.
Emva kokufumana i-id yevidiyo, isixhobo siyaqhubeka nokuthumela isicelo kwi-Twitter ukufumana idatha ye-json. Iqhosha lokukhuphela liza kubonakala ngezantsi kwetitter nganye nangaphakathi kwezixhobo zefestile.
Izinto onokuzikhuphela kwi-tweet nganye zibandakanya iividiyo, ii-gifs, yonke imifanekiso ekwi-tweet, imibhalo engezantsi enokufumaneka. Unokujonga kwaye wandise ii-avatars kunye neebhena ezinomgangatho ophezulu. Khuphela ngokulula iipletlet kunye neethegi kwii-tweets.
Qaphela: Esi sixhobo sixhasa kuphela ukukhuphela iifayile ezisingathwe yi-Twitter. Olu lwandiso aluniki ukufikelela kuzo zonke iwebhusayithi, ke abasebenzisi abanakho ukukhuphela iividiyo kwii-tweets ezifakwe kwezinye iiwebhusayithi.
Kutheni usebenzisa uKhuphela iVidiyo yeTwitter?
Ukuba ividiyo isuswe kwi-Twitter, uya kuba nakho ukuyibukela.
Zonke iividiyo ezikhutshelweyo zinokudluliselwa kwi-smartphone yakho ukuze zabelane ngokulula.
Naziphi na iividiyo ozikhuphelayo zinokubukelwa ngaphandle kweintanethi.
Ukujonga ividiyo ngokupheleleyo ukuba inde kwaye awunaxesha laneleyo.
Uyakwazi ukwenza uluhlu lokudlala olungaxhunyiwe kwi-intanethi xa useluhambeni.
☀ Khuphela ividiyo ye-Twitter kunye nengcaciso.
☀ Guqula ividiyo ye-Twitter ibe yi-mp4.
☀ Khuphela i-Ultra HD 1440p, HD epheleleyo 1080p, HD 720p ividiyo evela kwi-Twitter.
☀ Khuphela i-Twitter gif.
☀ Isikhupheli sevidiyo sabucala se-Twitter.
☀ Khuphela usasazo lwe-Twitter.
☀ Khuphela imifanekiso yoqobo kwi-Twitter.
☀ Umbonisi weprofayile ye-Twitter.
☀ Isikhupheli somfanekiso we-Twitter.
☀ Khuphela umfanekiso we-Twitter ongasentla.
☀ Khuphela iithonjana ze-Twitter.
☀ Khuphela ngokuzenzekelayo kwaye ugcine ifayile ngokwesihloko sevidiyo kunye nomgangatho okhethiweyo.
☀ Yenzelwe i-Android.
☀ Ukukhuphela ngobuninzi imifanekiso ye-Twitter.
☀ Khuphela i-Twitter ividiyo ebukhoma.
☀ Isikhupheli somculo seTwitter.
☀ Guqula ividiyo ye-Twitter ibe yi-mp3.
☀ Khuphela ividiyo kumyalezo othe ngqo we-Twitter.
☀ Ividiyo ye-Twitter kwisiguquli se-gif.
☀ Khuphela iitweets nge-hashtag.
Inethiwekhi yokuncokola iTwitter yenye yezona ndawo zidumileyo kwihlabathi. Indawo yenzelwe ukutshintshiselana ngemiyalezo esidlangalaleni isebenzisa ujongano lwewebhu, izixhobo zemiyalezo ekhawulezileyo okanye iinkqubo zomntu wesithathu zabasebenzisi be-Intanethi bayo nayiphi na iminyaka. Phakathi komxholo abasebenzisi abapapasha kwividiyo yeTwitter yenye yezona zinto zithandwayo.
Isikhupheli sevidiyo seTwitter
Isikhupheli sevidiyo seTwitter sisicelo sewebhu esikwi-intanethi sokukhuphela iividiyo ze-twitter kunye nee-GIF kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni ephathekayo ngokuthe ngqo.
Umkhupheli we-gif we-Twitter
Khuphela i-gifs kwi-Twitter. Gcina njengevidiyo.
Isikhupheli semibhalo engezantsi seTwitter
Khipha kwaye ukhuphele imixholo engezantsi kwi-Twitter.
Twitter ukuya kwi-mp4
Isixhobo sikuvumela ukhuphele iividiyo kwi-Twitter ngezigqibo ezintathu, i-SD, HD, kunye ne-UHD (ukuba ukhetho lukhona).
Khuphela iividiyo zabucala ze-Twitter
Unokuzikhuphelela nayiphi na ividiyo okanye umfanekiso kwi-twitter onokuyijonga, kubandakanya umxholo wabucala.
Simahla simahla kwaye Safe ukusebenzisa
Zonke iividiyo zikhutshwe ngqo kwiiseva ze-Twitter ze-CDN, zisenza esi sixhobo sikhuseleke ngokupheleleyo.
I-Twitter Downloader isebenza kakuhle kwiGoogle Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge kunye naziphi na izikhangeli zewebhu.
Fumana imibuzo kunye neempendulo apha-Uyigcina njani ividiyo ye-Twitter?
+ Yintoni iTV Downloader?
Isikhupheli sevidiyo seTwitter simahla ukuba sisixhobo esinokukunceda ukhuphele naziphi na iividiyo ezivela kuTwitter ukuze udlale ngaphandle kweintanethi.
+ Zigcinwa phi iividiyo emva kokukhutshelwa?
+ Ungayigcina njani i-GIF kwi-twitter kwi-iPhone?
Ukugcina i-gif kwi-twitter kwi-iPhone nceda ulandele la manyathelo. Yiya kwisicelo se-twitter esivela kwi-iphone yakho kwaye ufumane i-GIF njengoko ufuna kwaye uyigcine, ngobubele Thepha kwaye ubambe i-GIF ofuna ukuyigcina, cofa kwindawo yokugcina kwilayibrari, ukonwabele ifayile yakho yeGIF igcinwe.
+ Ngaba i-Twitter downloader igcina iividiyo ezikhutshelweyo okanye igcina ikopi yeevidiyo?
Asizigcini iividiyo. Kananjalo asigcini iikopi zevidiyo ezikhutshelweyo. Zonke iividiyo zibanjiwe kwiiseva zikaTwitter. Kwakhona, asigcini umkhondo wembali yokukhuphela yabasebenzisi bethu.
+ Ndizikhuphela njani iividiyo zabucala kwi-Twitter?
Ukuba ujonge ukukhuphela ividiyo yabucala kwi-Twitter, ke konke okufuneka ukwenze kukwazi i-URL yeTwitter. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokukhuphela iividiyo zikaTwitter kwiakhawunti yabucala. Phakathi kwabo, enye indlela kukwazi i-URL yeakhawunti yabucala ye-Twitter ngokwenza iakhawunti yeTwitter kwaye ulandele umntu ofuna ukwazi i-URL yee-tweets zakhe. Emva kokuba wamkelwe emntwini kwaye ukuba umntu uqinisekisa isicelo sakho sobuhlobo, uya kuba nakho ukubona zonke iifayile zabo zabucala. Ukukhuphela iividiyo kufuneka ufake ii-extensions zeChannel okanye iFirefox. ➥ Faka ngoku
+ Yeyiphi ifomathi yevidiyo ekhutshelweyo ye-Twitter?
Kuxhomekeke kumgangatho okhoyo wevidiyo ye-Twitter, ividiyo yethu yokukhuphela ividiyo ye-Twitter ikhupha i-1440p, i-1080p, umgangatho we-HD kunye nekhonkco levidiyo esemgangathweni ye-SD. Unokukhetha ukukhuphela nayiphi na into oyifunayo. Nangona kunjalo, kwezinye iimeko, umgangatho wevidiyo uphantsi kwaye ividiyo efumanekayo kuphela ikumgangatho we-SD.
+ Ungazikhuphela njani iividiyo ze-Twitter kwifowuni yam ye-Android?
Isikhupheli sevidiyo se-Twitter sele sifumaneka kwiFirefox ngeefowuni ze-Android. ➥ Faka ngoku
+ Zingaphi iividiyo endinokuzikhuphela kwi-Twitter?
Isikhupheli sevidiyo seTwitter asinayo imida, ngeyure, ngemini okanye abanye. Unokuzikhuphelela kwi-Twitter iividiyo ezininzi kunye nemifanekiso njengoko ufuna.
+ Ngaba ndingazikhuphela iividiyo ukuba andingomsebenzisi obhalisiweyo we-Twitter?
Hayi udinga ubhaliso lwe-twitter ukuze ukwazi ukungena nokujonga iividiyo.
Kunokubakho uluhlu lwezizathu ezinokubangela lo mbandela:
Ikhonkco elikhutshelweyo lisenokuba alilunganga okanye ikhonkco elaphukileyo.
Ikhonkco elikhutshelweyo linokuba lelakhawunti ekhuselweyo.
Ikhonkco ekhutshelweyo inokuba nomfanekiso omileyo hayi ividiyo.
+ Kufuneka wenze ntoni ukuba ividiyo ayikhupheli kodwa idlale endaweni yayo?
Ukuba ukwi-mobile, cofa ubambe ividiyo kude kube nokukhuphela ukhetho. Kwidesktop, cofa ekunene kwividiyo kwaye ukhethe Gcina ikhonkco njengenketho.
Khuphela iividiyo ze-Twitter ezikwi-HD ngokupheleleyo
Isikhupheli sevidiyo seTwitter sikunceda uvelise amakhonkco ngokuthe ngqo kwiividiyo zakho ozithandayo ze-twitter kwaye uzigcine ukuze ujonge kunye nokwabelana ngaphandle kweintanethi.
Isikhupheli sevidiyo seTwitter sisixhobo esihle ongasisebenzisa kwi-Intanethi ukukhuphela iividiyo kunye nee-GIFs kwi-Twitter ukuya kwikhompyuter yam.
Umkhupheli weVidiyo ye-Twitter ukhuselekile ngokupheleleyo kwaye ukhuphele iividiyo ngokuthe ngqo kwiiseva ze-Twitter ze-CDN.
Esi sixhobo sisebenza kuzo zonke izixhobo, kubandakanya iikhompyuter zekhompyuter, ii-smartphones kunye neetafile.
Esi sixhobo sikuvumela ukhuphele iividiyo (njengeeMP4s) kunye nee-GIFs kwi-Twitter.
Khuphela iividiyo zeTwitter sisixhobo esinokusebenziseka lula.
Indlela ekhawulezayo nethembekileyo yokukhuphela iiklip.
Esi sisixhobo esikhawulezayo nesicekeceke ekuvumela ukuba ugcine iividiyo ezivela kwi-Twitter ngokukhawuleza.
Ukongezwa okumangalisayo kokukhuphela ividiyo ye-twitter yosasazo.
Le yeyona ndlela ilungileyo kwi-app ye-tweet2gif.
I-Twitter Video Downloader Bot-Esona sixhobo sasimahla simahla kwi-intanethi sokukhuphela kunye nokugcina iividiyo kunye nee-GIF kwi-Twitter 2022
Ikhowudi ye-QR bitdownloader keepvid twdown odownloader saveas getsocialvids savetweetvid